Global Voices teny Malagasy » Afrikana Sisampatin’ny Ebola: Mitantara Ny Fahasitrànany Sy Ny Fanilihan’ny Fiaraha-Monina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Septambra 2014 4:55 GMT 1	 · Mpanoratra Lova Rakotomalala Nandika Erikah
Sokajy: Afrika Mainty, Cote d'Ivoire, Ginea, Liberia, Nizeria, Sierra Leone, Fahasalamàna, Fampandrosoana, Fanabeazana, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Hevitra, Mediam-bahoaka, Siansa, Vaovao Tsara, Voina, Vonjy Voina
Otrikaretina Ebola tarafinaa amin'ny faneho joriry elektirôna. Sary nalain'ny mpampiasa Flickr antsoina hoe NIAID. CC BY 2.0
Araky ny tarehimarika voaray farany  avy any amin'ny Fikambanana miandraikitra ny resaka Fahasalamana maneran-tany (WHO), trangan'aretina Ebola miisa 2.615 no voatatitra manerana an'i Afrika Andrefana ary olona miisa 1.427 no fantatra hoe matin'ny fihanahan'ilay otrikaretina mahatsiravina indrindra eran'izao tontolo izao . Mbola tsy misy fanàfany ny aretina Ebola hatreto, ary ny taham-pahafatesana nohon'ny fihanak'io areti-mifindra io farany dia manodidina ny 50 isan-jato  — na dia hita aza tamin'ny fianahana tany aloha fa tafakatra 90 isan-jato ny tahan'ireo olona voan'ilay areti-mifindra.
Mampihetsi-po tokoa ny maheno ireo olona sitran'ny aretina Ebola mitantara ny fiainany sy ny fomba niatrehany izany, ny fanampian'ireo mpiasan'ny Fahasalamana ao an-toerana, tao ihany koa ny alahelo sy ny fanilikilihana azy ireo nohon'ny tsy fahafantaran'ny olona ny mombamomba io aretina io.
Tamin'ny 20 Aogostra, namoaka lahatsary tao amin'ny YouTube ny WHO mampiseho ireo olona telo izay sisampaty tamin'io aretina io: Saah Tambah sy i Harrison Sakilla avy any Liberia ary i Matu Kamara avy any Sierra Leone.
Mitantara ny fomba nahazoany an'io aretina io sy ny fiainany taorian'ny fahasitranany i Saah Tambah:
Ny dadatoako no nahazoko ny aretina Ebola tany Koindu. Nandeha nitsidika azy aho nandritry ny alina roa satria tsy nisy olon-kafa afaka hikarakara azy. Andro vitsivitsy taty aoriana, maty izy ary namoy ny ainy ihany koa ny vadiny sy ny zanany vavy [..] Nanomboka nando aho ary nijaly tamin'ny aretim-pivalanana ka nandeha namonjy toeram-pitsaboana. Raha narary aho, dia nisalasala nyamin'ny hahasitranako ny fianakaviako. Misaotra an'Andriamanitra tamin'ny fisian'ireo dokotera ireo. Nanome taratasy ahy izy ireo izay manaporofo fa sitrana tamin'ny aretina Ebola aho sao mantsy misy olona tsy mino izany.
I Harrison Sakilla, 39 taona, dia avy any Foya ao avaratr'i Liberia. Izy no voalohany indrindra sitrana tamin'io aretina io avy ao amin'ny faritra misy azy. Namoy ny reniny noho io aretina io izy. Hoy izy:
Nohon'ny fikarakarako ny reniko no nahazoako ny aretina.Raha toa ka misy olona manomboka mahatsikaritra ny soritr'aretina dia tokony hanantona ivon-toerana mitsabo ny aretina Ebola izy. Hanome fitsaboana ho azy izy ireo ary afaka ny ho sitrana soa aman-tsara izy.
Milaza i Matu Kamara, 52 taona, fa namoy ny rahavaviny sy ny zanany izy noho io aretina Ebola io:
Nahatsiaro nareforefo ny zanako vavy taorian'ny nikarakarany ny iray tamin'ny vadin'ny vadiko. Nilaza fa nangatsiaka be izy. Nentiko tany amin'ny hopitaly izy ary nomen'ny dokotera fanafody. Efa nihatsaratsara izy kanefa nanomboka nando indray. Maty tety an-tsandrinay izy. Nahatsiaro hafahafa aho ary nanomboka nando. Nankany amin'ny hopitaly aho ary roa andro taty aoriana, dia efa nihasitrana. Izahay sitrana avy tamin'io aretina io dia mila taratasy manaporofo izany hasehonay ny olona hoe tratry ny aretina Ebola izahay ary efa nahazo fitsaboana. Aza miandry hoe efa diso marary loatra vao manantona hopitaly.
Matetika mijaly sy marary fo amin'ny fanilikilihan'ny fiarahamonina ireo olona sitrana tamin'io aretina io satria tsy fantatr'izy ireo ny fomba fifindrany. Toy izany mihitsy ny tantaran'i Dr. Melvin Korkor, dokotera ao amin'ny hopitaly Phebe ao Liberia. Sitrana tamin'ny aretina Ebola i Korkor kanefa manazava izy fa ny havany sy ny namany dia matahotra ny hikasi-tànana azy, araka ny tatitry ao amin'ny ” Front Page Africa Online” ao Liberia :
Na dia efa nilaza aza i Korkor fa efa sitrana tamin'ny aretina Ebola dia mbola mihatakataka aminy ny olona. ‘Ankehitriny, na aiza na aiza toerana alehako any amin'ny tanàna misy ahy, aty amiko daholo ny mason'ny olona toy ny hoe misy pesta aho “, hoy izy. Nahatsikaritra ilay mpanao tatitra ao amin'ny FrontPageAfrica izay tafahaona tamin'ny dokoteran'i Phebe teny amin'ny campus Cuttington tamin'ny Alatsinainy fa miala ny toerana misy azy ny olona rehefa mipoitra avy any izy ary tsy mety mandray ny tànany na miara-misakafo aminy ny namany, mpianany ary ireo havany […] “Misaotra an'Andriamanitra aho fa sitrana soa aman-tsara. Fa ankehitriny kosa dia manana aretina vaovao aho: ny fanilikilihan'ny olona ahy,” hoy ny nambaran'i Korkor tao amin'ny onjam-peo iray ao an-tànanan'i Gbarnga. ‘Mbola ratsy lavitra nohon'ny tazo io aretina (ny fanilikilihana) io.
Iray amin'ireo firenena miisa efatra izay miezaka miady amin'ny fihanahan'io aretina io i Liberia, ankoatran'i Ginea, Nizeria ary Sierra Leone.
Nanam-bintana ihany koa i Claudius Barnawolo, teratany Liberiana iray, dokotera mpanampy, sitrana tamin'ny aretina Ebola. Nandray feo ny fijoroany vavolombelona sy ny fianakaviany izay mahatsapa ihany koa ny fanilikilihan'ny fiarahamonina nisy azy ireo ny Front Page Africa Online:
Mbola mijanona ho fanamby iray ny fampahafantarana ny olona mikasika ny aretina Ebola sy ny fomba fifindrany. Nanomboka nanao fanentanana lehibe momba ny fisorohana ny aretina Ebola  i Côte d'Ivoire na dia tsy mbola nahitàna trangan'aretina aza hatreto. Mbola nanao fanentanana vaovao indray ny mpitoraka blaogy Ivoiriana hanaovana ny ALS Ice Bucket Challenge mikasika ny fampianarana momba ny aretina Ebola  tamin'ny nampiasàny tenifototra amin'ny fiteny frantsay #moussercontreEbola (miady amin'ny aretina Ebola amin'ny alalan'ny fahadiovana):
Manan-danja amin'ny fitiliana sao misy ny otrikaretina Ebola ireo marary ary ny fiadiana amin'ny fihanahan'io otrikaretina io ny asan'ny mpandalina ny siansa toa an'i Dr. Korkor na Barnawolo any amin'ny efitra fanaovana fikarohana. Nanasongadina ny lanjan'ny asan'izy ireo tany Liberia  (tamin'ny alalan'ny Jina Moore) i Abdoulaye Bah, mpanoratra an-tsitrapo sy mpandika teny ato amin'ny Global Voices:
Jeejuah, 30 taona, ary vehivavy roa hafa samy nirotsaka an-tsitrapo, no nahandro ny sakafon'ny olona miisa 12 samy manan-dabja be, saingy lavitry ny maso ao Liberia amin'izao fotoana izao. Ireo sakafo roa ambinin'ny folo ireo dia natokana ho an'ireo teknisiana izay mitily ny ràn'ireo marary ahiahiana ho tratry ny aretina Ebola. Mandeha mankany an-tranon'ireo olona ireo izy ireo na koa manampy ireo dokotera any amin'ny tobim-pitsaboana ny aretina Ebola izay rempotra tanteraka, manindrona fanjaitra ny lalandrà ka maka ny ràn'ireo olona manana toe-pahasalamàna tsy azo antoka, na koa olona manana areti-mifindra. Avy eo, entin'izy ireo miverina any amin'ilay hany Laboratora tokana fanaovana fikarohana any Liberia ny ràn'ireo marary, làlana maherin'ny adin'ny iray miala an'i Monrovia renivohitra.
Mazava ho azy fa mitaky ezaka lehibe avy amin'ny daholobe ny fiadiana (sy ny fahasitranana) amin'ny Ebola any amin'ireo firenena tratran'io aretina io, indrindra indrindra moa fa ny fanilikilihana ireo marary ao anatiny sy ivelan'ny faritra misy azy. Raha momba an'io areti-mifindra io, dia hita fa toa tsy vaindohan-draharahan'ny fiarahamonina ny manaiky fa tokony hiray hina izy ireo ary hifandamina ao anatin'ity ady ity raha tsy izany dia hiara-maty daholo toy ny adala.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/09/07/63530/
 tarehimarika voaray farany: http://www.afro.who.int/en/clusters-a-programmes/dpc/epidemic-a-pandemic-alert-and-response/outbreak-news/4260-ebola-virus-disease-west-africa-22-august-2014.html
 fihanahan'ilay otrikaretina mahatsiravina indrindra eran'izao tontolo izao: http://www.reuters.com/article/2014/08/05/us-health-ebola-mortality-idUSKBN0G526M20140805
 manodidina ny 50 isan-jato: http://www.usatoday.com/story/news/nation/2014/08/19/ebola-who-encouraging-signs/14281055/
 tafakatra 90 isan-jato : http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/en/
 tatitry ao amin'ny ” Front Page Africa Online” ao Liberia: http://www.frontpageafricaonline.com/index.php/politic/2484-greet-him-from-distance-phebe-doctor-face-ebola-stigma-after-survival
 fanentanana lehibe momba ny fisorohana ny aretina Ebola: http://www.ipsnews.net/2014/08/cote-divoire-steps-up-public-education-to-keep-ebola-count-at-zero-amid-west-africas-worst-outbreak/
 fampianarana momba ny aretina Ebola: http://observers.france24.com/fr/content/20140821-une-douche-mousse-lutter-contre-ebola?ns_campaign=reseaux_sociaux&ns_source=twitter&ns_mchannel=social&ns_linkname=editorial&aef_campaign_ref=partage_aef&aef_campaign_date=2014-08-21&utm_source=d
 Nanasongadina ny lanjan'ny asan'izy ireo tany Liberia: https://globalvoicesonline.org/2014/08/23/the-heroic-everyday-work-of-lab-technicians-in-the-fight-against-ebola-in-liberia/